Tareenka Xawaare Sare leh ee Dib loogu Soo nooleeyo Dalxiiska Sivas | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasTareenka Xawaare Sare leh ee Dib loogu Soo nooleeyo Dalxiiska Sivas
28 / 08 / 2019 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, TURKEY
tareenka xawaaraha sare wuxuu sare u qaadayaa dalxiiska sivas
Duqa magaalada Sivas Hilmi Bilgin wuxuu indho indhayn ku sameeyay goobta dhismaha ee Mashruuca Kale, oo qiimo u kordhin doonta Sivas, isla markaana helay macluumaad ku saabsan shaqooyinka sida muuqata loo qabtay.
Mashruuca Kale, oo iskuxiraya Masaajidka Ulu iyo Gök Madrasa, ayaa qodista qadiimiga ah ay sii soconaysaa, iyadoo dhismaha maktabadda, arasta, jiifka iyo guriga qadada la dadajiyay.
Mashruuca, oo loo dhisi doono qaab dhismeedka guri guri iyo xaafad ku taal Sivas, ayaa gacan ka geysan doonta dalxiiska magaalada. Wadarta dhismayaasha 102 ayaa lagu dhisi doonaa dhismayaasha ka dhex jira baaxadda mashruucu.
"GÖK MEDRESE IYO ULU MOSQUE WAA LAGU QABANAYAA MASHRUUCKA KALE"
Duqa Bilgin wuxuu sameeyay qiimeyn kadib baaritaanadii garoonka wuxuuna yiri, “shaqadu waxay usii socoto sidii loogu talagay. Marxaladda koowaad, aagga jilicsanaanta wuxuu daboolayaa 25% ee mashruuca. Waxaan rajeyneynaa, xaraashka dheeriga ah ee aan qaban doonno sannadkan, qayb ka mid ah 35% ayaa la dejin doonaa. Mashruuc ku kici doona lacag dhan 100 milyan. Waxaan ku dhex gali doonaa Gök Medrese iyo Ulu Masjidka mashruuca qalcaddayada. Waxaan aaminsanahay inay wax weyn ku soo kordhin doonto Sivas xagga shuruudaha taariikhiga iyo dhaqanka. Waxaan hiigsaneynaa inaan isku darno labajibaaranaha magaalada Sivas, oo ah midka kafeega ugu qurxoon ee dalkeenna, oo aan la galno mashruucayaga qalcadda oo aan ka dhigno mid ka mid ah laba-geeska adduunka. Waxaan rajeynayaa in dhamaan dadka walaalaheena ah ay ku faani doonaan mashruucan. Hadafkayagu waa in aan ilaalino reeraheena abtirsiinta, iyo inaan abuurno magaalo aad ufiican.
“TAFISADA TABABARKA SIYAASADA CARUURTA EE LAGA BADAN KARAA
Bilgin wuxuu cadeeyay inay ka fiirsanayaan dhamaan mashruucyada sidii ay iskugu dhafan lahaayeen waxuuna intaa raaciyay, “Waxaan rajeyneynaa in Sivas ay usii gudbi doonto qeyb kale marka laga yimaado imaatinka tareenka xawaaraha dheereeya ee magaaladeena sanadka soo socda. Waxaad awoodi doontaa inaad gaadho magaalooyinka sida Ankara, Istanbul iyo Konya wakhti gaaban oo u dhexeeya saacadaha 2,5 iyo 5. Muhiimadda mashruucu wuxuu noqon doonaa mid si cad u muuqan doona iyadoo ay saameyn ku yeelanayso dadka walaalaha ah ee dalkeenna ah iyo dalxiiska shisheeye. 2020 - 21, mashruucu wuxuu noqon doonaa hilib iyo lafo. Waan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka gaysatay ..
Madaxweyne kuxigeenka Bekir Sıtkı Eminoğlu iyo maareeyaha qeybta laxiriirta iyo mas'uuliyiinta shirkada qandaraasleyda ayaa weheliya Madaxweyne Bilgin inta lagu gudajiray booqashadiisa iyo baaritaanadiisa.
Xiriirka kubadda cagta ee kubadda cagta ee Konya-Antalya ayaa soo jiidan doonta dhaqaalaha Beyşehir
Baro sidaad u soo nooshahay waddada Birta ee Georgia
Wareegga dalxiiska jiilaalka ayaa soo kabanaya dalxiis
Mashruuca Tramway wuxuu dib usoo noolaan doonaa Altiparmak Street
Wasiirka Tufekci, mashruuca tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars wuxuu soo nooleeyn doonaa waddada dhagta ee taariikhiga ah
Tareenka Waddada Waddada
Khadka Tareenka ee Samsun Thick si Loo Soo Nooleeyo Taariikhda
Si toos ah ula xiriir Hilmi
Masaajidka Sivas Grand